I-Gamepron: IiHacks eziPhambili ezingafumanekiyo kunye nokukhohlisa ngeAimbot
IiHacks zemidlalo ezingafunyanwanga
Wamkelekile kwi Umdlalo
INkokeli yeNtengiso kwiiMpazamo zomdlalo ezingafumanekiyo.
Imidlalo engama-40 +, iiHacks ezingama-100 + kunye nokubala. Gamepron kuphela ukhetho kwiimfuno zakho ukukopela.
Jonga Zonke iiHacksTyelela ivenkile yethu
Amava okhuseleko olungaphumeleliyo ngokukhetha ukuqhekeza ngeyona nto ikumgangatho ophezulu ekhoyo apha kwiGamepron. Iiakhawunti zakho azisoze zibe semngciphekweni xa usebenzisa enye yeendlela zethu zokukopela kunye ne-ESP, njengoko siphumeze inkqubo ekhethekileyo yokukhusela ukukopela kuko konke ukukhutshwa kwethu!
Amaxabiso eehacks zethu aya kwahluka ngokokubona ixesha ongathanda ngalo, kwaye abanye abantu bade bathi sibiza ixabiso le "premium". Izixhobo esizikhuphela eluntwini ziphezulu emgceni, kwaye amaxabiso afikeleleka kakhulu.
Ukungafani kwezinto kwii-hacks ozisebenzisayo kuya kukuvumela ukuba uphumelele kwimidlalo emininzi ngaphandle kwesihloko osidlalayo, yiyo loo nto i-Gamepron inikezela ngokungqongqo amanqaku afanelekileyo (njenge-Aimbot, i-ESP, iWall Hack kunye neNoRecoil) kuyo yonke izixhobo siyazikhulula. Njengamagama athi, izixhobo zethu ziya kukunceda kuphela kwi-Gamepron!
IiHacks zazo ZONKE izihloko zakho ozithandayo
I-Gamepron ikulungele ukukukhonza ngokusemandleni ethu, nokuba ngowuphi umdlalo okhangele kuwo ukukhusela iihacks. Sinikezela ngobuqhetseba kwimidlalo eyahlukeneyo, yonke ephuhlisiwe ukukunceda uphumelele ngakumbi- indlela oza kuphumelela ngayo loo midlalo ixhomekeke kuwe! Ngale ndlela inkulu kangaka yokhetho lokukhetha onokukhetha kulo, uya kuziva ngathi ungumntwana kwivenkile yeelekese xa uthenga iihacks nge Gamepron. Nokuba yi-Fortnite, i-Overwatch, i-Warzone, okanye naluphi na uhlobo oluthile oludumileyo, sinazo izinto ozifunayo!
I-Fortnite ibijikeleze iminyaka embalwa, kodwa inqanaba lokuthandwa kwalo mdlalo wezemidlalo usamangalisa. Unokufumana ukufikelela kuzo zonke iiHacknite Hacks ezilungileyo apha kwiGamepron- nokuba yiAimbot yokuchaneka okuphezulu okanye inqaku lesilumkiso lokukugcina ulumkisile, sinako konke.
I-PUBG inokubangela uxinzelelo xa izangqa ezimbalwa zokugqibela zisiza, kodwa ukusebenzisa iPUBG Hack kuya kukuvumela ukuba uphelise umdlalo ngaphandle koxinzelelo (kwaye ngokuphumelela!). Ukuchaneka nokubona indawo yotshaba lwakho kubalulekile kwi-PUBG, kwaye iPUBG yethu yokuKhangela ikuvumela ukuba wenze ngokuchanekileyo oko.
I-PUBG Lite yinguqulelo yeselfowuni ye-PUBG kunye nesihloko uninzi lwabaphuhlisi bayo abalibaleyo nokuba bakuqwalasele ukukhutshwa kwabo. Asikuvumeli nje ukuba ungene kwi-PUBG Lite, kodwa zonke ii-PUBG Lite hacks zenziwe ngomgangatho engqondweni.
I-Apex Legends inokuba yinto eyonwabisayo kubo bobabini abadlali beSolo kunye neQela, kodwa ukusebenzisa i-Apex Legends hack kuya kukuvumela ukuba uchume nokuba imeko injani. Ayinamsebenzi ukuba ulahle phi, ziphi izixhobo onazo, okanye loluphi uhlobo lomntu olisebenzisayo- impumelelo iyakuza lula apha.
Umnyama we-6 wokungqinga iiHacks
Ukungqingwa kukaTom Clancy's Rainbow Six kungumdlalo ogqibeleleyo wabadlali abakhuphisanayo kwihlabathi liphela, kwaye oko kuthetha ukuba uya kufuna ukusebenzisa iRB6 Hack yethu ukuqinisekisa ukuba uhambelana nesihlwele. Nokuba ucwangcisa ukudlala ngokuBekwa kuLuntu okanye kuLuntu, i-Gamepron inokukusa kwinqanaba elilandelayo!
Kumdlalo osindayo njengoRust, nantoni na enokwenzeka-yiyo loo nto ukusebenzisa iRust Hack yindlela elula yokuqinisekisa impumelelo yakho. Abantu bahlala besenza nantoni na abanokuyenza ukuze baqhubele phambili eRust, kwaye ngamanye amaxesha kuye kufuneke ukuba wenze ukuba iRust Hack kunye nokuziphindezela.
Ukuba ngumdlalo omtsha ngokuthe kratya kuthetha ukuba uninzi lwabanikezeli bokungazigqibi izixhobo abazigqibanga izixhobo zabo zeValorant, kodwa hayi i-Gamepron! I-Valorant Hack yethu ebonakaliswe ngokupheleleyo iyafumaneka kuye nakubani na nakuwuphi na umntu oyifunayo, ngaphandle kwenqanaba lesakhono sakho. Yiva ukuba kunjani ukuphumelela kuseto lokhuphiswano!
UTom Clancy ICandelo lesi-2 sesinye isihloko esimangalisayo esikuvumela ukuba wehle kwindlela kaTom Clancy ngendlela eyahlukileyo. Ngumdubuli womntu wesithathu ozaliswe ziintshaba ze-AI ezinamandla aphezulu kunye nabadlali bokwenyani ngokufanayo. Sebenzisa iCandelo 2 lomnqweno yimfumba ukuze uhlale phambili kukhuphiswano kwaye uchume.
Uninzi lwethu luyalibala ukuba kunjani ukusilela kwimidlalo yevidiyo, de kufike i-Escape from Tarkov. Ukuba ufuna i-EFT Hacks onokuthembela kuyo ukuze ikugcine ukhuselekile ngexesha lolo hlaselo luyingozi, i-Gamepron inazo zonke izinto ofuna ukuziphanga kunye nokudubula ngokulula.
Lawula ngendlela obuya kwenza ngayo nakweyiphi na enye into ngesihloko seCall of Duty usebenzisa i-COD emnyama ye-Ops Cold War hacks! Ngezixhobo zeGoldpron uya kuphumelela, ngaphandle kwesakhono sakho. Sibeka amandla ngqo ezandleni zabasebenzisi bethu apha kwiGamePron.
Iimfazwe zethu zale mihla zokulwa ziya kukuvumela uchume nokuba yeyiphi na indlela oyidlalayo, njengoko iintshaba zakho zingayi kukhuseleka kwingqumbo yakho. Unokwenza iMfazwe yangoku yeAimbot (ibulale ukubulala kwangoko) ukuqinisekisa ukuba xa ufuna umntu asweleke, kuyenzeka- akukho mibuzo ibuziweyo!
Ifowuni yoMsebenzi: IiWarzone Hacks akunzima kangako ukuzifumana, kodwa ngaba bobunye obu bukhulu? Oko kunokufumaneka apha kwiGamepron. Ukuba ulindele ngakumbi kwiWarzone Hack yakho kwaye ufuna ezona zinto zinokwenzeka, sinesona sixhobo sigqibeleleyo esikunye!
I-Overwatch isaqhubeka isomelele nasemva kwayo yonke le minyaka, intle kakhulu. Njengabantu abaninzi abayidlalayo nangoku, oko kuthetha ukuba kuya kubakho uninzi lwempumelelo evuthiweyo ekukhetheni- sebenzisa iHackwatch Hack kunye nenkqubela phambili kumdlalo obekiweyo kunye noluntu ngokungxama.
Ngaba ujonge ukuphakamisa amanqanaba akho e-adrenaline kwaye ufumane ukupompa kwentliziyo yakho? Xa unayo i-DBD Hacks yethu enikwe amandla, wonke umdlalo uza kubonakala ngathi kukuhamba ngokukhululeka epakini. Juke indlela yakho yokuphumelela njengoMsindisi, okanye slash ngokuchaneka njengoMbulali.
Abanye bathe i-Oasis yokugqibela ifana nomxube phakathi kwe-ARK kunye neRust, evakalayo ngokuba kutheni abantu abaninzi benomdla kuyo. Ukuba ufuna ukuphumelela kulo mdlalo mtsha, eyona ndlela ilula yokwenza oko kukusebenzisa ii-Oasis hacks zethu.
Ukanti omnye umdlalo wokusinda, icala elingasekhoyo liza kuvavanya izakhono zakho zokudlala kuyo yonke into enokwenzeka. Ukuba kukho into enokubakho e-Deadside hack evumela abaqalayo ukuba baxhamle kwasekuqaleni, i-Gamepron inoxanduva lokuyizisa eluntwini. Awunakho ukufikelela kwizixhobo zokunqongophala apha, kuphela zizinto ezilungileyo.
Idabi lomlo lesi-5 ngumdlalo omkhulu owenza ukuba uhambe kwiimephu ezinkulu kumdlalo ngamnye, onokubacaphukisa ngamanye amaxesha. Nangona oku kuyinyani, ukusebenzisa ii-BF5 Hacks zethu kuya kwenza ukuba ukubulala kuphumelele kwaye kube lula (kunye nokubekwa phambili!). Yiva amandla ngayo yonke iMfazwe yethu ye-5 hacks!
I-Counter-Strike: Ukucaphukisa umhlaba jikelele ibisisiseko kuluntu lokudlala ixesha elide, yiyo loo nto sisenalo iqela lophuhliso. Umdlalo usaphumelela, kwaye ii-CSGO Hacks zethu ziya kukunceda ukhule kakuhle! Sukubeka imali yakho kwizixhobo zokunqongophala ezinokuthi zikunqande, ngakumbi xa unokuthembela kwi-GamePron yokwenza umsebenzi wenziwe ngokufanelekileyo.
Ngaba ujonge i-Hyper Scape Aimbot ethembekileyo? I-Hyper Scape Hacks yethu iya kukubonelela nge-Aimbot ephezulu, kunye nezinye izinto eziza kwenza ukuba kube lula ukuphumelela. Zabalaza kwakhona, njengoko isixhobo silapha ukunceda. Unokuwoyisa onke amaqela ngokwakho ngezixhobo zethu ezisebenzayo.
I-Anarea Battle Royale ngumdlalo othandwayo onamajoni amaninzi ngaphakathi, kodwa ungathini ukoyisa bonke ngaxeshanye? Sebenzisa i-Anarea Blue Hack kuya kukuvumela ukuba ufezekise kanye loo nto, kwaye ifunyanwa apha kwiGamePron. Chonga indlela yokutshabalalisa abachasi bakho usebenzisa i-GamePron!
Sebenzisa kwethu phakathi kweCoco Coco ukufezekisa iindawo eziphakamileyo phakathi kwethu! Abantu abayi kuba nakho ukukumisa nje ukuba uqengqele, ngakumbi ukuba unazo zonke izinto ezizodwa ezinikwe amandla (ezifumaneka apha kwiGamePron). Phakathi kwethu kunokubonakala ngathi ngumdlalo omnandi wokudlala nabahlobo bakho, kodwa izinto zinokuba nzima ngamanye amaxesha. Ayikhe ibabuhlungu into yokuba phakathi kwethu uCoco ubuye umva xa amaxesha esiba nzima!
I-DayZ izokuphosa kakhulu, enokubonakala inzima kubadlali abatsha. Nokuba umtsha kumdlalo okanye ufuna nje "ukonyusa", unokuthembela kwii-DayZ Hacks zethu ukuzisa! Fumana uncedo olufunayo kwiGamePron. Zonke izixhobo zethu zilungiselelwe ukuba zihlale zingabonakali ngexesha lokusetyenziswa, ngenxa yoko awusoze wakhathazeka ngokuvalwa. Ukhuseleko lubaluleke kakhulu xa ukhetha ukugcoba nge-GamePron!
Ukuba unokhuphiswano olukhulu kwaye ufuna ukuphumelela kuyo yonke imidlalo oyidlalayo, usebenzisa iiHacks Guys Hacks zethu ziya kukusa kude. Ungathembela kwi-GamePron ukubonelela ngalo lonke olona phawu lusebenzayo kwiiHacks Guys Hacks, kunye nokhetho olongezelelweyo. Ufanele ukuqokelela izithsaba ezininzi njengoko ungathanda! Sebenzisa iHacks Guys Hacks yethu kuyakuvumela ukuba uphumelele yonke imidyarho, kwaye ukunqande ukupheliswa ngokulula.
Isihogo Masikhululeke ngumdlalo oqinisekisa inqanaba elithile lokugxila, kwaye ukuba uyasilela, ngekhe ube nempumelelo enkulu. Ngombulelo, ungasebenzisa isihogo sethu Masikhuphe iiHacks zethu ukuze ufumane amandla kuwo onke amadabi akho! Kuninzi okunokufezekiswa kulo mdlalo, kunye nee-engile ezininzi ezahlukeneyo zeentshaba zakho zokuhlasela. Fumana ukuzithemba okudingayo ukuze ugqwese kwaye uthenge isitshixo semveliso yeSihogo sethu Masikhulule namhlanje.
Ukulinganisa kunokuba nzima ukufezekisa abanye, kwaye kukho amaxesha apho iihacks ezisekwe kwiselfowuni yeyona nto ubheja ngayo. Sebenzisa i-PUBG yeFowuni yokuSungulwa kwe-Android kugula kuya kukuvumela ukuba ugqwese nangona ungalingisi! Ngeempawu ezoyikekayo ezinjengePUBG Mobile Aimbot, iWallhack, i-ESP, kunye nezinye ezininzi, azikho ezinye iindlela ezinokuthelekisa umgangatho weGamePron. Thenga isitshixo semveliso namhlanje kwaye utyhoboze kunye nomnikezeli obalaseleyo kwi-Intanethi!
Sebenzisa i-PUBG Mobile Emulator hacks kukunika ukufikelela kwiimpawu ongazange ucinge ukuba zinokwenzeka ngelixa udlala iPUBG Mobile. Ungasebenzisa i-Aimbot ye-stellar eya kuthatha ezantsi iintshaba ngesantya, okanye iRadar ekugcina uqaphele! Zombini iziqwengana ezinamava kunye nezinamava zinokuxhamla kwizixhobo zethu, konke ekufuneka ukwenzile kukuthenga isitshixo semveliso kwaye unokukhuphela i-PUBG Mobile Emulator hacks kwangoko.
Nangona umdlalo umtsha, akukho nto yahlukileyo malunga neziphumo esizinika apha kwi-GamePron. Ngokunika abasebenzisi bethu ukufikelela kwezona zixhobo zibalaseleyo, sihlala sibabeka kwindawo apho banokuphumelela khona! Ayinamsebenzi ukuba ugaxe kangakanani okanye udlala imidlalo, usebenzisa iRogue Company Hacks yakho kuya kukunceda uchume ngeendlela ezininzi. Yizame ngokwakho!
I-Spellbreak ngumdlalo ogqibeleleyo kuye nakubani na othanda ilizwe eliyiphupha. Unokuba ngumthakathi ogqwesileyo okanye uvaliweyo, ngumcimbi wokuyisila ngaphandle - okanye unokusebenzisa iiSpellbreak Hacks zethu! Musa ukuchitha naliphi na ixesha lakho okanye imali kwezinye iindlela zokuphamba. Umdlalo wePron ngumboneleli ongu- # 1 wazo zonke iiSpellbreak hacks ezikwi-Intanethi, kwaye kungenxa yomgangatho ofumaneka kuzo zonke izixhobo zethu. Fumana olona luvo lubalaseleyo apha!
Zininzi izinto eziguqukayo eziya ekuphumeleleni ngexesha lokufika kweQela, kwaye ukusebenzisa iiQela leQela lethu kuzokunciphisa iingxaki ohlangabezana nazo. Nokuba ziZombies okanye abadlali bokwenyani, ukusebenzisa isixhobo sethu kuya kukugcina ukhuselekile. Fumana ezona zinto zibalaseleyo usebenzisa i-Squad ESP hack, okanye thabatha nje abachasi bakho ngokungxama ngokwenza iQela lethu elithembekileyo leAimbot. Umdlalo wePron unayo yonke into oyifunayo!
Nangona zininzi ezinye izixhobo kwintengiso ezibanga ukuba zikuguqule zibe yinkosi yeWarface, zimbalwa kakhulu kuzo eziza kusebenza njengale. Sebenzisa i-Warface GamePron ye-hack ukufumana umda kumchasi wakho nakweyiphi na imeko, nokuba banobuchule kangakanani na! Abanye abadlali baya kuba neentloni ekusebenziseni iihacks kuba bexhalabile malunga nokuvalwa, kodwa oko akunakwenzeka apha. Zonke iinkohliso zethu zi-100% ezingafumanekiyo ukugcina abasebenzisi beMidlaloPron bekhuselekile.
Nokuba ufuna ukuba lusizi okanye ujonge nje ukunqanda ungquzulwano, ungasebenzisa i-GTA 5 ye-Exclusive Hack ukuphatha izinto. Ukudubula ngokuchanekileyo kwe-100% okanye ukukhupha nasiphi na isithuthi ongathanda ukusisebenzisa ngesi sixhobo sigqibeleleyo! Ukuba uyagula kwaye udiniwe kukuya kwi "Passive Mode" kwaye ufuna nje ukudlala umdlalo, ukulwa nomlilo ngomlilo ngokwenza i-GTA 5 Exclusive Hack!
I-GamePron iphuhlise enye yeepaladins Hacks ezinokuthenjwa ezifumaneka kwiwebhu, inika abasebenzisi bethu ukufikelela kwezinye zezona zinto zinamandla zifunyenwe kwiPaladins cheat. Ufanelwe ngamava angcono okudlala! Ukulungiselela ubusuku bokulahleka ePaladins akusengomxholo, ngakumbi xa ufumana ukufikelela ixesha elide. Zithengele isitshixo semveliso namhlanje kwaye ufumane amava athotyileyo ajikeleze!
Iringi ye-Elysium ngomnye umdlalo omtsha othatha umdlalo we-Intanethi ukuya kububanzi behorizoni, kodwa ungonwabela umdlalo omninzi ngaphandle kwe-ROE Cheats elungileyo. Sebenzisa ii-ROE GamePron hacks kuyakukunika ukufikelela kwezinye zezona zinto zinamandla kwezakha zafunyanwa kwisixhobo! I-GamePron inikezelwe kuphuhliso lwee-hacks ezikumgangatho ophezulu ixesha elide, kwaye asizukutshintsha ithoni yethu nangaliphi na ixesha kungekudala - ukuba ufuna iziphumo, ngokuqinisekileyo ukwindawo elungileyo.
Ukuzingela: Umboniso oza kuvavanya (kunye nabahlobo bakho ukuba kufanelekile!) Ngeendlela ezininzi, njengoko ingengawo amaqela aphikisayo ekufuneka ujonge kuwo. Thatha zombini oominenga kunye nabanye abadlali ngaphandle kwenkxalabo usebenzisa uHunt yethu: Shownown yimfumba!
Uqhushululu: Isitshingitshane esihlala sihleli siza kuhlala sithanda abalandeli abanzima bemidlalo yokudubula, kodwa ungaya ngaphezulu nangaphaya nge-Insurgency: Sandstorm hacks!
Kukangaphi usifumana isixhobo esiza kukuguqula sibe ngumatshini wokuphumelela ongayeki? I-GamePron inempumelelo kuphela kubasebenzisi bethu engqondweni, ke xa ufuna iziphumo, ukusebenzisa uLwandle lwamasela kuHack yile ndlela ekuphela kwayo. Abadlali abagulayo nabadiniweyo kukutshatyalaliswa kwi-Intanethi akufuneki baphinde bajongane nayo, njengoko uLwandle lwethu lwamasela iHacks luya kutshintsha izinto zibe ngcono.
I-ARMA 3 hacks akukho lula ukuzifumana kwezi ntsuku, njengoko uninzi lwabaphuhlisi sele beluthathile ukuba ludlulele kwezinye iiprojekthi. Ayisiyiyo kuphela i-ARMA 3 Aimbot kunye ne-ARMA 3 ye-ESP / iWall Hack, kodwa zininzi nezinye izinto ekufuneka uziqwalasele xa ukopela ngeGamepron.
Nokuba iyinjongo yakho okanye indawo ekuyo iintshaba, ungasebenzisa ii-RDR2 Hacks zethu ukufumana ithuba kuyo nayiphi na imeko. Kuhlala kulungile ukufunda ngakumbi malunga nokukungqongileyo, njengoko oko kuya kukunceda uphumelele. Nokuba uyi-novice xa kuziwa kwi-hacks ungazuza kwizixhobo zethu. Zonke zilula kwaye zichanekile, zinika nokuba lelona qhekeza "liluhlaza" ithuba lokulwa kwi-intanethi! Singababoneleli be- # 1 be-RDR2 Hacks ngesizathu.
Lungiselela amadabi amakhulu kunye neemephu ezintsha kwibala ledabi 2042 ngokufumana ukufikelela kumlo wethu omangalisayo weMfazwe ye-2042. NgeStellar Battlefield 2042 aimbot, wallhack, kunye ne-ESP kwicala lakho, ukuphumelela imidlalo emininzi sisiqinisekiso.
"I-Gamepron ibonelela ngeepesenti ezingama-100 ezingabonakali, yiyo yonke into endakha ndayifuna."
Zisebenza njani iiHacks zethu zePC kunye nokukhohlisa?
Sithengisa izitshixo zemveliso apha kwiGamepron, enokusetyenziselwa ukufikelela kuzo zonke iihacks ezimangalisayo esizenzileyo. Nje ukuba isixhobo sikhululwe, sinikezela ngenani eliqingqiweyo leendawo zokubeka kubasebenzisi bethu-okokuqala kufika, qala ukukhonza, ke uya kufuna ukwenza ngokukhawuleza.
Isisombululo sokuGqibela sokugqibela
Zonke ii-hacks zethu zezona zisisisombululo esipheleleyo sayo yonke into, nokuba ngowuphi umdlalo ojonge ukukhohlisa kuwo. Ukujonga umgangatho kunye nenani leempawu ezikhoyo, kunzima ukuthi kukho enye indlela ebhetele ekhoyo phaya. Xa ufuna iziphumo, i-Gamepron kuphela kwegama onokulithemba.
Nawuphi na umdlalo okhethiweyo wokukhetha umdlalo
Sinokhetho olukhulu olukhethiweyo apha kwiGamepron ehamba kwimidlalo eyahlukeneyo, enika abasebenzisi bethu ukufikelela kwelona khathalogu ibhetyebhetye kakhulu kwi-intanethi. Sineehacks ezininzi kwimidlalo eyahlukeneyo, ke ukhetho lolwakho!
Bhatala kuphela ixesha olifunayo mihla le, iveki okanye inyanga nenyanga
Akunyanzelekanga ukuba uhlawule ngaphezulu ukuba awucwangcisi ukusebenzisa ii-hacks ixesha elide, njengoko sibonelela ngezitshixo zemveliso ezisebenza yonke imihla, ngeveki, okanye ngenyanga. Sinexesha elinokulinganisa iimfuno zabantu bonke apha eGamepron.
Khetha umdlalo ofuna ukuwudlala! Khetha kukhetho olubanzi lwezihloko esizigubungeleyo apha kwiGamepron kwaye ulawule abachasi bakho ngaphandle komsebenzi onzima.
Khetha i-hack elingana nayo
Sinikezela ngezinto ezininzi onokukhetha kuzo xa kuziwa kukungakhethi - khetha ngokulula izinto ozifunayo uze uqhubeke nokuhlawula
Zonke iintlawulo ezithathiweyo apha eGamepron zisingathwa kusetyenziswa iprosesa yethu ekhethekileyo yokuhlawula ukuqinisekisa ukhuseleko lolwazi lwabathengi
Emva kokufumana ukufikelela kwimveliso yesitshixo, ungayisebenzisa ukukhuphela cheats ngokufanelekileyo. Senza ukhuphelo kunye nenkqubo yofakelo ilula apha kwiGamepron!
Gamepron ngumboneleli okhokelayo hacks umdlalo kunye cheats
Zonke izixhobo zethu zenziwe ngobuchule ukuze kugcinwe abasebenzisi bethu bephambili, njengasekupheleni kosuku, ubhatalela inzuzo - kuxhomekeke kuthi ukuqinisekisa ukuba ulawula umdlalo ngamnye!
Nawuphi na umdlalo kunye nabanikezeli abaninzi, i-intanethi rhoqo kumdlalo ngamnye onokukhetha kuwo
Akukho namnye umboneleli kwiwebhu oza kuthatha izixhobo zakho nzulu njengoko sisenza apha eGamepron. Nokuba ngowuphi umdlalo ofuna ukukopela, siya kuhlala sinomboneleli othembekileyo wokubonelela ngokukhohlisa okuphezulu.
Isebenza njani Gamepron
Kutheni usebenzisa i-aimbot, cheats okanye hacks
IiHacks zayo yonke imidlalo yakho oyithandayo!
Yonke imidlalo oyithandayo inokugqogqwa, yinto nje yokufumana inkonzo elungileyo yokuba nokholo kuyo. Awungekhe ufune ukusebenzisa ii-hacks ezikumgangatho osezantsi kwiakhawunti ephambili, kungasathethwa ke ngeakhawunti yesmurf! Iphantse yafana nokucela ukuvinjelwa ngenjongo, njengoko uninzi lwabaphuhlisi bedala iihacks kwezi ntsuku bangakhathali ngokhuseleko lwabasebenzisi babo. Awuzukukwazi ukuthenga ukufikelela kuzo zonke izihloko zakho ozithandayo, kodwa uya kuba nakho ukwenza noxolo lwengqondo. I-Gamepron ayifumaneki kwaye iyakuvumela iiakhawunti zakho ukuba ziqhubele phambili ngokukhawuleza usebenzisa iihacks, kodwa ikuvumela ukuba wenze njalo ngaphandle kwawo wonke umngcipheko onxulumene nokukopela.
Nokuba ufuna ukuqhekeza iRust, iOverwatch, iEscape evela eTarkov, okanye nasiphi na esinye isihloko esimangalisayo esiye sazenzela ubuqhetseba, iGamepron yindawo efanelekileyo yazo zonke iimfuno zakho zokugenca. Abo banesidingo esinqabileyo sokufumana izisombululo ekugqibeleni banokulufumana uxolo, njengoko iGamepron ilapha ukugcina usuku!
Zeziphi izinto ezibandakanyiweyo?
Nokuba ungumlandeli wabadubuli bomntu wokuqala, imidlalo yokusinda, okanye nayiphi na into ephakathi, i-Gamepron izakuba nezixhobo ezinokuthenjwa obukade uzifuna ngalo lonke eli xesha. Sinikezela ngeAimbots, i-ESP / iWall Hacks, iNoRecoil, kunye nezinye izinto ezininzi ezimangalisayo ngaphakathi kwezethu-kwaye sisiqalo nje eso. Inani leempawu ezikhoyo ngaphakathi kwezixhobo zethu sesinye sezizathu eziphambili zokuba kutheni abasebenzisi beqhubeka nokubuyela kokunye, njengoko besele besazi ukuba iGamepron izakubanika ukufikelela kwezona cheats zibalaseleyo kwi-Intanethi. Ngelixa abanye abaphuhlisi bexakekile bezama ukusika iimbombo kwaye benze inzuzo naphina apho banako, i-Gamepron iya kuhlala ihleli igxile ekunikezeleni abathengi bethu ngesisombululo esithembakeleyo.
Nokuba siphuhlise ukungena ngaphakathi okanye sisebenza kunye nomnye wamaqabane ethu ahloniphekileyo, zonke iihacks ozisebenzisayo ezivela kwiGamepron ziya kubandakanya izinto ekusenokwenzeka ukuba awuzange uzibone ngaphambili. Ngokuthandwa yiNyawo, Ukonakala okuphezulu, kunye noMgama, bambalwa abantu kule planethi abaza kuqhubeka nesantya sakho!
Kutheni ndifuna iAimbot?
Uninzi lweemidlalo ziya kuvuza umdlali onesakhono, kwaye akukho nto ingako onokuyenza malunga noku-yiyo loo nto ubona abasasazi kunye nabadlali abaziingcali beqhelisela kangangoko banako. Xa ungakwazi ukuchitha iiyure phambi kwekhompyuter yakho okanye ukwala ukwenza njalo, unokujonga nje kwi-Gamepron ukuba ube ne-Aimbot efanelekileyo kwiimfuno zakho. Nokuba ufuna i-EFT Aimbot, iMfazwe yangoku yeAimbot (okanye iWarzone Aimbot!), Okanye i-EFT Aimbot, i-Gamepron kuphela komnikezeli onokukugcina ulawula ngokukhuselekileyo.
Ii-Aimbots zethu ziza zixhotyiswe ngeendlela ezininzi kunezona zininzi, njengoko uya kuba nakho ukusebenzisa ukuthanda ukubulala kwangoko kunye nokuBekwa phambili kwamathambo. Ii-Aimbots zonke zilungiselelwe iiNjongo eziZenzekelayo / uMlilo, kwaye inqaku leSmooth Aiming livumela ukubulala kwakho kubonakale kungokwemvelo ngakumbi. Ukuba ufuna ukukopela ngobuqili, kodwa usafuna amandla omlilo aza nokusebenzisa iAimbot, iGamepron inesisombululo esifanelekileyo. Injongo engeyiyo ayisoze iphinde ibulale kwakhona!
Thenga onke amaHacks akho namhlanje!
Ungathenga ukufikelela kuzo zonke ii-hacks ozifunileyo apha kwiGamepron, yinto nje yokwenza ngoku. Nokuba ukhe wakopa ngaphambili akunamsebenzi, kuba nabona badlali be-novice kwihlabathi banokusebenzisa ii-hacks zethu. Senze ukhuphelo kunye nenkqubo yofakelo ilula ukuqinisekisa ukuba ii-hacks ziya kuba zikulungele ukuya ngokukhawuleza. Ngoluhlu olubanzi lwemidlalo kunye neehacks onokukhetha kuzo, umntu unokuphikisa ukuba i-Gamepron yeyona nkonzo iphambili yokufumana ulwazi ngoku!
Intlawulo yakho iya kuphathwa yinkqubo yethu ekhethekileyo yokuhlawula ukuqinisekisa ukuba akukho lwazi lwakho lomntu lusemngciphekweni wokuvezwa, nolunye uluhlu lokhuselo esiluthathe ixesha ukulongeza apha kwiGamepron. Ungathenga izitshixo zemveliso ezininzi ngendlela othanda ngayo, ukuba nje iindawo ezivulekileyo zivulekile kwaye nexesha olikhangelayo liyafumaneka. Thenga isitshixo semveliso namhlanje kwaye uqalise!
Phumelela. Yonke. Umdlalo.
The amandla Ukuphumelela yonke iMidlalo ngeHackpron Hacks kunye nokuKopela